Kuongorora kwemahofisi epamusoro emahofisi eLinux | Linux Vakapindwa muropa
Un hofisi suite kana hofisi suite hapana chimwe kunze kwekuunganidzwa kwezvirongwa ayo anoshandiswa kumahofisi kana kushanda nemagwaro (gadzira, gadzirisa, kuronga, kugadzirisa, kuongorora, kupurinda, nezvimwewo) mune mamwe mabasa kana dzimba dzekumba. Uye sekuziva kwako, kune akakosha mahofisi emahofisi senge Microsoft Office, Apple iWork uye LibreOffice, nekusiyana kwavo uye kufanana.
Hofisi yakanaka suite Inofanirwa kuve inoshanda, inogadzira uye inosanganisira ingangoita izwi processor, spreadsheet, database maneja, maturusi ekushanda pamwe nemifananidzo, mharidzo, mamaneja eruzivo, vatengi vetsamba, ajenda, kudhirowa, nezvimwe. Uye zvakare, munyika yatiri kurarama, aya masutu ari kuramba achifambidzana neInternet uye achiuya nemabasa akawanda anoita kuti zvinhu zvive nyore apo achipa mikana mitsva munguva ino apo zvese zvinofanirwa kunyorwa.
Hofisi suite inowira mukati meyavanoti "productivity software", uye kutanga kwayo kwakadzokera kuma80s, apo Starburst yakabatanidza iyo WordStar izwi processor nemaapplication akadai seCalcStar sepaspredishiti, uye DataStar yemadhatabhesi, ese ari mupaketi angave ari iwo muyero unozoita kuti mamwe masuti aoneke kubva kumakwikwi akafanana Microsoft Office muma90s nevakwikwidzi vayo kana yakavhurwa sosi dzimwe nzira dzatinoziva nhasi.
Zvakanaka, muchinyorwa chino, isu tinokupa iwe kuenzanisa kuongororwa kweakanakisa mahofisi emahofisi ayo aripo kuLinux. Nenzira iyi iwe unozogona kusarudza zvirinani zvinoenderana nezvaunofarira kana zvaunofarira zvekushandisa uye usarasike munyika mune zvigadzirwa zvakawanda zvekuti dzimwe nguva zvinonetsa kusarudza chaicho. Uye sezvandinogara ndichitaura, sarudzo yakanakisa ndiyo inoita kuti unzwe kugadzikana uye inoita kuti ubudirire pabasa rako rezuva nezuva.
1 Iyo yakanakisa hofisi suites yeLinux
1.1 Iyo Gwaro Nheyo LibreOffice:
1.4 Kingsoft WPS Hofisi:
1.5 Evermore Software Yozo Hofisi (EIOffice):
1.6 SoftMaker Hofisi:
1.8 Mahofisi ehofisi masutu:
Iyo yakanakisa hofisi suites yeLinux
Iyo indasitiri inotungamirwa neMicrosoft Office, iyo nhasi iri imwe yemahofisi epamusoro emahofisi uye iri kutsvaira musika. Iyi suite haiwanikwe natively yeGNU Linux uye mamwe masisitimu anoshanda, pane chete shanduro dze desktop dzinoshanda masisitimu Windows uye Mac OS X, uye kunyangwe mapurojekiti anoenderana neApple uye online mugore akaonekwa, ivo vachiri kusiya zvakanyanya kudikanwa kana isu tinofananidza iyo nedesktop vhezheni kana kwete ivo vakasununguka kudaro.
Kune rimwe divi, yeLinux kune dzimwe nzira dzakawanda, unogona kusarudza kunyange kuisa Microsoft Office neWine kana kushandisa muchina chaiwo kumhanya isiri-yechinyakare software pane yako distro. Nekudaro, iwe hauchazozvida kana iwe ukagara uchifunga iyo rondedzero yemahofisi masutu anowanikwa kune iyo penguin chikuva:
Iyo Gwaro Nheyo LibreOffice:
Iyo Gwaro Foundation yagadzira forogo yeOpenOffice inonzi LibreOffice uye rave rinonyanya kushandiswa hofisi suite muLinux nyika. Icho chirongwa chemahara chave chiri kutiperekedza kubvira 2010. Izvo zvakanyorwa muC ++, Java nePython, zvichibva pane kodhi yeOpenOffice apo nhengo dzeprojekti iyi pavakagadzira imwe sarudzo iyi apo Oracle yakatenga Sun Microsystems, kambani yaichengeta OpenOffice. org.
Kunyange zvakadaro Oracle akakokwa kujoina Iyo Gwaro Sisekelo uye upe zita reOpenOffice.org kuchirongwa, zita rechinguvana LibreOffice rakaguma rave iro zita repamutemo mushure mekuramba kwaOracle. Oracle haina kungo ramba kupihwa asi yakaraira avo vaiita chirongwa cheOpenOffice.org kuti vasiye basa Asi LibreOffice yaisazogamuchira chete rutsigiro kubva kune vanogadzira 30 OpenOffice avo vakasiya, asiwo kubva kumakambani akaita seNovell, Red Hat, Canonical neGoogle kugadzira suite yakazvimirira inoenderana neOPenDocument mafaera (ISO).
LibreOffice ine chinongedzo chiri kuzogadziridzwa, asi izvozvi zvinoita kunge chinyakare kupfuura MS Office (pamwe zvinotiyeuchidza nezve Microsoft Office 2000), kunyange izvi zvichiita sezvakajairika kune ese mapurojekiti atinopa pano. Kunyange zvakadaro, chitarisiko chayo chakareruka chinovanza chishandiso chine simba uye chakanakisa kushanda naye. Mahofisi mazhinji eruzhinji nemakambani akaendesa masisitimu avo kune ino suite, pamwe nekuchengetedzwa kunotevera kwemarezinesi, sezvo achigoverwa pasi peGPL, sekutaura kwatakaita pane ino blog.
Zvikumbiro zvinosanganisirwa mune suite zvinotevera:
Munyori: ndiro izwi processor, kune avo vanobva kuWindows, ndiyo imwe nzira yeIzwi kana WordPerfect. Iyo ine WYSIWYG mashandiro uye inobvumidza kumisikidza zvinyorwa kuPDF uye HTML. Mashandiro ayo anenge akafanana neMS Word, kunyangwe kuenderana nemafomati eShoko kuchiri kudikanwa kukwenenzverwa, kubvira pakuvhura magwaro kubva muchirongwa ichi pane mafonti, zvirongwa kana zvinhu zvinogona kuchinja.
Clack: iyo software yemaspredishiti, yakafanana neMicrosoft Excel kana Lotus 1-2-3. Nechirongwa ichi chakazara iwe unozogona kushanda pamwe nekuverenga kwako uye kugadzirisa ako maakaunzi pasina dambudziko.
Base: Sezvo iwe uchigona kufungidzira kubva kuzita rayo, iri dhatabhesi manejimendi software kuti iwe ugone kunyora ruzivo neiyi huru software inova imwe nzira kuMicrosoft Access nevamwe vakaita saiyo.
Kufadza: Ndiyo imwe sarudzo yeMicrosoft PowerPoint, ndiko kuti, software yekuratidzira yakakwana kuti ugadzire masiraidhi ako uye ugone kuaona aine Flash player yakabatanidzwa.
Dhirowa: yakafanana neMicrosoft Visio, ine zvakafanana maficha. Iyo vector grafiki mhariri uye dhizaini yekushandisa. Zvinogona kukuyeuchidza nezvezvishandiso zvekutanga zveCorelDraw, pamwe nezvirongwa zvekumisikidza seSribus neMicrosoft Publisher mune dzimwe nzira.
Mat: Ndingadai ndisina imwe nzira yakananga muMicrosoft Office, asi chirongwa chinoshanda kwazvo chevanyanzvi. Yakagadzirirwa kugadzira uye kugadzirisa masvomhu mafomula atinogona ipapo kubatanidza nyore nyore mune mamwe magwaro akadai semaspredishiti, zvinyorwa zvemavara, nezvimwe.
LibreOffice ine yakakosha nharaunda kumashure kwayo inoita kuti kukura kwayo kukurumidza kupfuura mamwe mapurojekiti Izvo zvinoenderanawo neIO (OpenDocument) zvinyorwa, pamwe nevamwe vakaita seMicrosoft Office. Parizvino suite LibreOffice inotsigira anotevera ekuwedzera uye mafomati:
AppleWorks Shoko .cwk
BMP mufananidzo .bmp
Makoma akaparadzaniswa nekoma .csv
Rugwaro mameseji .txt
Dhairekodhi Shanduko Fomati .diff
Yakapetwa PostScript .eps
Yakawedzerwa Metafile .emf
Graphics Kuchinjana Fomati .gif
HPGL inoronga faira .plt
HTML .html uye .htm
Ichitarou 8/9/10/11 .jtd uye .jtt
JPEG mufananidzo .jpg uye .jpeg
Lotus 1-2-3 .wk1 uye .wks
Macintosh Mufananidzo faira .pct
Microsoft Excel 2003 .xml
Microsoft Office 2007 Hofisi Vhura XML .docx / .xlsx / .pptx
Microsoft Pocket Shoko .psw
Microsoft RTF .xml
Microsoft Word .doc uye .dot
Fomati yeNetpbm .pgm / .pbm / .ppm
Mufananidzo CD .pcd
Portable Document Format .png
Smart Game Fomati .sgf
StarOffice StarCalc .sdc uye .vor
Tagged Image File Fomati .tif uye .tiff
Kufungidzira TGA .tga
Yakabatana Hofisi Fomati .uof / .uot / .uos / .uop
X PixMap .com
OpenOffice.org, yakatanga neSun Microsystems Senzira yemahara uye yemahara yeMicrosoft Office, yakava imwe yeanonyanya kufarirwa nzira. Pazasi payo yakatanga kubva ku StarOffice yakagadzirwa ne StarDivision uye yakatengwa neSun. Asi kutenga kwaOracle kweZuva kwakakonzeresa huzivi hweSun kuvhurika. Pakupedzisira Oracle yaida kusiya chirongwa nekuti yaisafarira uye yakapa kodhi yeOpenOffice.org kune iyo Apache Software Foundation. Aya ndiwo mabatiro aiitwa iyi suite kuti irwisane nehanzvadzi yavo LibreOffice, kunyangwe ikozvino nevashandisi vashoma pane iyo forogo.
Kana zvakadaro izvo zvinoshandiswa zvaisanganisira, une zita rimwe chete uye nderezvinangwa zvakafanana nezvakataurwa muchikamu chekare cheLibreOffice. Ndokunge, isu tinogona kuwana Nyora seyakagadziriswa processor yezwi, Math kugadzira masvomhu mafomula, Dhirowa kudhirowa, Base yedhatabhesi, Calc sespredishiti uye Impress yekuratidzira. Nezve mafomati uye ekuwedzera, iwo zvakare akataurwa pamusoro apa sezvo ari mapurojekiti ehanzvadzi, ndokuti, LibreOffice forogo kana forogo yeOpenOffice. Uye kunyangwe kukura kwacho kuchiitwa zvakasiyana, fananidzo dzakakura.
KDE yakagadzira iyi Calligra suite izvo zvinogona kuoneswa seimwe nzira huru kune avo vaviri vekare vane masimba. Iyo zvakare yemahara suite pasi peGPL rezinesi, yakanyorwa muC ++ ichivimba neQt neKDE Platform (kunyange ichigona kuiswa pane chero distro). Ichi chirongwa chakabuda sekuenderera mberi kweKOffice muna 2010. Uye kutaridzika kwazvo kwakasiyana kubva kune maviri apfuura kuri kushamisa, pamwe kuchikonzera dambudziko kune avo vanobva kune mamwe mapuratifomu asi angave anokwezva kune vamwe.
Calligra ine rutsigiro rwehuwandu hwemafomati uye ekuwedzera, asi iri yemahara, inoshandisa iyo default OpenDocument fomati pazvinogoneka. Kana zviri zvemaapplication akabatanidzwa mupakeji, iwo ane akafanana mashandiro kuLibreOffice uye OpenOffice, kunyangwe iwo ari akawandisa uye nekudaro akazara mune ino kesi, uye sezvaungaona, ivo vanogonesa iyo mifananidzo uye yekukwevera chikamu
Mazwi: izwi processor rakaenzana neKunyora kana Microsoft Word. Yaimbozivikanwa seKWord.
Mapepa spreadsheet yakafanana neCalc kana Microsoft Excel. Yaimbozivikanwa seKSpread apo chirongwa ichi chaive KOffice.
Nhanho: chirongwa chekugadzira mharidzo, seMicrosoft PowerPoint kana Impress. Yaimbozivikanwa seKPresenter.
Kexi: ndiro zita rakapihwa chirongwa cheCalligra dhatabhesi manejimendi, senge Base neMicrosoft Access. Yaimbozivikanwa seKugar.
Urongwa: maneja weprojekiti kugadzira inonakidza kwazvo Gantt machati. KPlato ndiro raive zita raakagamuchira pamberi pekuchinja.
Brain dump: chimwe chikumbiro chekugadzira zvinyorwa uye mepu dzepfungwa dzinogona kukubatsira kushandisa nguva yako uye kurangarira zvinhu muzuva rako zuva nezuva. Pakutanga yanga isina chakaenzana muKOffice, yakaunzwa muCalligra Suite 2.4 uye inoonekwa seyakavanzika mune izvi.
Kuyerera: chirongwa chekudhirowa yekugadzira inoyerera inoyerera ine simba rinorema rinoremerwa stencils. Isati yave Kivio.
Carbon: chishandiso chekuveza vector. Zita rayo rakachinja zvishoma, sezvo raimbozivikanwa seKarbon14 ...
Krita: yekugadzirisa uye kushandisa raster mifananidzo. Iyo ndeimwe yeakanakisa software aripo kune iri basa uye nezve izvo isu zvatinotaura zvakanyanya mune ino blog. Iyi superprogram, yaimbozivikanwa seKrayon neKImageshop. Pamwe zvinokuyeuchidza nezvezvirongwa zvakaita saCorel Painter.
Author: Yakakosha app yekugadzira e-mabhuku akafanana neBook Munyori uye izvo zvinogona kubatsira nemadhijitari marongero. Ichi chishandiso zvakare chitsva, chakaunzwa muCalligra 2.6.
Kingsoft WPS Hofisi:
WPS Hofisi yave ichiwana vashandisi pane akasiyana masisitimu anoshanda, kusanganisira iwo akavakirwa paLinux kernel. Chaizvoizvo zvakazozivikanwa neayo app yeApple uye vazhinji vakasarudza kuyedza iyi Kingsoft suite nekuda kwechitarisiko chayo chinofadza. Kunyangwe ivo vaita basa rakakura uye WPS Hofisi inogona kutariswa seimwe sarudzo kune mamwe makwikwi emakwikwi, padanho rehunyanzvi rinosiya zvakawanda zvichidikanwa uye hazvigone kutarisirwa kutsiva LibreOffice, Calligra, OpenOffice, nezvimwe.
Kunyangwe isina rutsigiro rwepamutemo rweSpanish, pane atove maticha ekutsanangura mashanduriro awo mune mamwe maros. WPS Hofisi ine matatu chete maapplication. Nezvirongwa izvi, kambani yeChinese inoda kuti tiite rese basa, kunyangwe paine zvisingakwanisike. Asi zvine simba ine dhizaini yayo dhizaini «Ribhoni» seMicrosoft Office iyo inogona kufadza ziso uye kugadzikana kushanda nayo kana iwe uchibva kuMS Office. Aya mapurogiramu ndeaya:
WPS Munyori: Ndiro izwi rako processor rinoti rinokwikwidza neShoko kana Munyori.
Mharidzo yeWPS: kugadzira mharidzo senge Impress kana PowerPoint.
WPS Spreadsheets: shandisa maspredishiti senge Excel kana Calc.
Muchidimbu, kana vachida kukwezva vamwe vashandisi, vanofanirwa kunatsiridza mashandiro avo nesimba ravo, chimwe chinhu chiri kure neLibreOffice kana Calligra, uye kunyange OpenOffice. Asi kana iwe uchida dhizaini yayo, heino ...
Evermore Software Yozo Hofisi (EIOffice):
Evermore Software ndiyo kambani iri kumashure kwe Yozo Office, inonyatso kuzivikanwa seEIOffice (Evermore Yakabatanidzwa Hofisi). Iyi imwe nzira isiri yemahara, kunyangwe mumaonero angu iri kure nekuve mukwikwidzi kune vekare. Nekudaro, isu tinopa iyo uye tinokuudza iwe kuti inogona kutsigira zvinyorwa muHofisi Open XML mafomati. Ehezve, inowanikwa mumitauro yakasiyana, kunyangwe ichiratidzika kunge yakamiswa nguva pfupi yadarika, neshanduro ya2012 seyekupedzisira yakaburitswa pawebhusaiti yepamutemo.
Kusiyana neiyo yapfuura, SoftMaker Hofisi yazvino uye iyo 2016 vhezheni yave kuwanikwa yeLinux uye mamwe mapuratifomu. Haisi yemahara software kana, yaive freeware, saka yemahara, kunyangwe nekufamba kwenguva yave yekutengesa, kubhadhara zvakati kana zvishoma, zvinoenderana neshanduro (Standard kana Nyanzvi) yaunosarudza. Yakagadziridzwa kubvira 1987 neGerman SoftMaker, inotsigira Microsoft Office uye OpenDocument mafomati.
Yakagadzirwa nematurusi akasiyana akadai se:
TextMaker: Seshoko processor.
SoftMaker Mharidzo: kugadzira mharidzo.
Yeye base base, nepo iyo Professional vhezheni zvakare inosanganisira zvimwe zvishandiso zvakaita se: mail mutengi, maduramazwi, nezvimwe.
SoftMaker, yakafanana neyakapfuura suite, zvakare ine yemahara suite yako. Mune ino kesi inonzi FreeOffice uye ine rezinesi rekushambadzira nekushandisa mudzimba pasina kubhadhara chero chinhu. Kuva hanzvadzi yeSoftMaker Hofisi, FreeOffice ine zvakafanana zvinoshandiswa, ndokuti, TextMaker, PlanMaker uye Mharidzo. Nekuda kwekureruka kwayo, inogona kukuyeuchidza nezve maturusi akaita seWordPad maererano neshoko kugadzirisa ...
Mahofisi ehofisi masutu:
Gore rakura uye rinotipa isu maturusi emagetsi akawanda iyo inogona kushandiswa kubva kune chero bhurawuza uye inoshanda sisitimu. Kubatsira kuri pachena, unogona kumhanya usinga tsamira pasisitimu yekushandisa yaunoshandisa uye kubva chero kwaunoda, asi mukudzoka iwe unofanirwa kushanda online, chimwe chinhu chingave chisina kugadzikana kune vamwe kana vasina kubatana panguva iyoyo kana izvo zvinogona uve usina kuchengetedzeka kune vamwe vanoshanda.nezvinyorwa zve "zvakavanzika zvepamusoro" uye ivo havadi gore iri rakapusa kwazvo ...
Hofisi suites inopihwa mugore seSawaS (Software seSevhisi) ndeaya:
Google Docs: hapana sumo inodiwa, Google yakavaka chikuva chakakura zvichibva pamaakaundi ako eGmail. Unogona kushandisa chigadzirwa ichi chakabatana nevamwe, senge GDrive kuchengetedza zvinyorwa zvako ipapo wozvigovana. Iyo yakavakirwa paAJAX uye izere online online suite ine izwi processor, spreadsheet uye mharidzo yekuratidzira. Inogona kushandiswa mahara kana kutenga Enterprise sevhisi yebhizinesi.
Microsoft Office Web Apps: Iri basa reMicrosoft kukwanisa kushandisa Hofisi yako pamhepo. Inopa mukana weIzwi, Excel, PowerPoint, uye OneNOte. Inopawo Outlook.com neakaunzi yako, Karenda, uye OneDrive kuchengetedza. Kune yangu kuravira kwakaringana uye pandakaiyedza, handizive kana zvakaitika kune mumwe munhu, yakaramba ichikanda mameseji ekukanganisa. Mukuzvidzivirira kwake ndichati ndakazviedza kare kare uye pamwe izvi zvachinja ...
Kingsoft Hofisi Suite: WPS zvakare ine yepamhepo vhezheni yekushandisa kubva kune chero bhurawuza ine yakafanana maapplication seayo desktop desktop, kunyange iine zvimwe zvikanganiso.
BataOffice: Kunge Google Docs, yakavakirwa paAJAX uye inosanganisira Karenda, Gwaro, Kutumira mameseji, Kutaurirana, Wiki uye zvimwe zvishandiso zvisina kusanganisira zvimwe zvakafanana. Kunge sevhisi yeGoogle, inowanikwawo mahara kana sebasa rebasa.
ONLYOFFICE Vashandi: online hofisi suite yakagadzirwa naAscensio System SIA, iyo inosanganisa izwi processor, spreadsheet uye mharidzo yekuratidzira. Yakanyanya kukosha asi inogona kubatsira zvakanyanya.
Zoho Hofisi Suite- Iyo yemahara, yakagadzirwa neZoho Corporation. Inosanganisira izwi processor, spreadsheet, processor processor uye groupware yebasa rekushandira.
Apple iWork yeICloud: ndezvemahara, asi zvine mwero. Iyo Apple iWork suite inogona kuwanikwa kuburikidza nekunyoresa kuti uwane account yako uye maficha. Izvozvi iri muchikamu chekuvandudza beta, saka usatarisira zvakawandisa ...
Feng Hofisi: Inozivikanwa seOpenGoo, yakavhurwa sosi uye inokutendera iwe kushandisa yepamhepo hofisi suite, ichikubvumidza iwe kuti utore iko kunyorera pane server yekuisa Yakave yakagadzirwa neFengOffice seyakabatanidzwa yakavhurwa sosi chirongwa.
LibreOffice Pamhepo: Iyo Gwaro Foundation inosanganisira iyo yepamhepo hofisi suite nekuda kwekubatana kwaCollabora uye IceWarp uye kuti inoronga kuvhura sevhisi muna 2016. Ichiri mukubudirira asi ichave ichokwadi munguva pfupi. Tichaona zvaanotipa ...
simpdesk: is online service inopa hofisi suite yakagadzirwa neSindesk Technologies. Inopa kuenderana neMicrosoft Office senge zhinji uye inobhadharwa, nemari yekunyorera iri pakati pe $ 3.50 ne $ 20 pamwedzi zvichienderana nepaki raunosarudza.
Ndinovimba yakabatsira iwe uyezve Usazeze kusiya zvaunotaura, mazano, kushoropodza, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Mahofisi akanakisa emahofisi e2016 eLinux
bichomen Isaac Palacio akadaro
Google Docs uye LibreOffice
Pindura bichomenIsaac Palacio
rakashambadza bhuku vaisaziva Evermore Software Yozo Hofisi (EIOffice)
Unoshaya microsoft office 365 imwe SaaS inonakidza kushandisa mulinux.
Pindura kuna LordsaeronSaeron
Iwe unotsanangura iyo LibreOffice interface se "yechinyakare", asi kubva kumawindo ezviratidzo zviri pachena kuti iyo Apache OpenOffice interface ndiyo yechokwadi yechinyakare. Hofisi 2000 yakanga isina mavara akazara, isina mumvuri pamagumo epeji, isina mabharanzi asina muganho, uye hapana kupa ne anti-aliasing mubhokisi rekusarudza remafonti (chimwe chinhu kusvika parizvino hachina Hofisi 2016 ... inonzwisa tsitsi), kana iyo bar yemamiriro isina miganho, kana iwo mabhokisi ekugadzirisazve. Zvirinani LibreOffice yagadzira zvigadziriso kuchimiro chayo ... Uye zvinofanirwa kuve pachena kana iwe uri kuzvienzanisa neApache OpenOffice.
Zvinotaridza kuti chiratidzo ichi chakakanganiswa pakutanga
"Chikamu chinotongwa neMicrosoft Office, ino nhasi ndiyo imwe yemahofisi akakwirira"
Ini ndinofunga kuongorora kweWPS hakuna kunaka. Sezvo chiri chakanakisa chishandiso, uye ndicho chinotsiva chakakwana chevashandisi vakajaira Microsoft Office, maererano neshoko rezvinyorwa, mharidzo uye maspredishiti. Wepakati mushandisi ndizvo zvaanozviitira. Vashandisi vangu havana kana kunyunyuta nezveWPS. Uye pasi peiyo GNU / linux nharaunda, changa chiri chinhu chakakosha kuita pasina windows.
Pindura kune yum
LibreOffice yandishamisa, ndaifunga kuti chiri chinhu chiri nyore asi pandakachiisa gore rino 2016, ndakaona kuti ihofisi ine simba hofisi ndakanga ndisina zano rezvese zvingangodaro nekuti kwainge kune makore neMicrosoft office (inova zvakanakisa) ini ndinofunga kuti kana ikawanikwa muhuwandu hwayo, kutamira kune ino suite kuchave kunonakidza
BlackArch Linux ine vhezheni itsva